Dambudziko kune vagadziri veWWDC "Vhara zvindori zvako" | Ndinobva mac
Dambudziko kune vagadziri veWWDC «Vhara mhete dzako»
Apple ichawedzera dambudziko kune vanogadzira avo vanotora chikamu muchiitiko paWWDC Muvhuro uno, asi kwete zuva rimwe chete, avo veCupertino vanoda kuti kubva munaJune 3 kusvika China China 7 (anova mazuva ayo chiitiko) vagadziri vanotora chikamu mune izvi chinetso chinonzi «Vhara Rings dzako».
Vhara zvindori zvako, iko kunyorera kuchazowanikwa kune vabatsiri vanogadzira uye ivo vanofanirwa Nyoresa pamberi pewebsite yekambani kuti uwane kodhi yekukoka. Neizvi tinoreva kuti hausi dambudziko rakavhurika kune vese vashandisi, kunyangwe isu tichivimba kuti vachakurumidza kuvhura imwe yemunhu wese, kubvira kubva muna Kubvumbi 22 nedambudziko reZuva rePasi havana kuvhura imwe.
Dambudziko mumapoka evana
Izvi zvitsva uye zvinoita sekunge Apple iri kusangana nematambudziko matsva ekukurudzira vashandisi kuita maekisesaizi, mune iyi kesi vagadziri vanofanirwa kujoina mapoka evana uye vanowana mapoinzi pamwe chete sezvavanovhara mhete dzekufamba, kurovedza muviri uye kumira.
Dambudziko iri nyore uye Ese zvikwata zvinowana mazana maviri emapoinzi kana kupfuura mukati memazuva edambudziko zvichahwina mubairo ichaunzwa nemusi weChishanu, Chikumi 8 paMcEnery Convention Center imwechete. Uyu mubairo unenge uri chimwe chinhu chekufananidzira senge t-shati, mapini kana zvimwe zvakadaro, mibairo iyo yakatopihwa kune vashandi vakamboita zvinetswa zvepanyama. Vagadziri vanoda kusaina vanogona kuzviita kubva kune ino Apple webhusaiti uye vawane kodhi yavo.
Iyo poindi system haifanirwe kutsanangurwa, asi ichokwadi kuti mhando iyi yedenho inogona kushanda semuyedzo kune rimwe zuva kutangwa pakati pevashandisi kuti isu hatisi vagadziri uye kuti tinogovana chiitiko chedu chemuviri nedzimwe shamwari, vatinozivana navo kana hama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko kune vagadziri veWWDC «Vhara mhete dzako»
Iwe unogona ikozvino kutenga iyo Beats Makumi emakore Kuunganidzwa muSpain
Beta yekutanga yeTVOS 11.4.1 uye watchOS 4.3.2 yave kuwanikwa